Iyo Apple Watch Series 6 oximeter inoshanda sekushambadzira zvinoenderana nekudzidza | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 26/09/2021 19:00 | Apple Watch, Noticias
La utano rave raive rekucheka-axis maunoshanda nema mobile phones. Apple inoziva izvi uye kwemakore maturusi uye mamwe matekinoroji akaunzwa kuongorora hutano hwemushandisi pane avo zvishandiso. Muenzaniso weiyi ndiko kuiswa kwehurongwa hwekuita maelectrocardiograms muApple Watch Series 5. Gore rakapera, neApple Watch Series 6, yakaunzwa oximeter yekugona kuyera kuzadza kweoksijeni muropa. Chidzidzo chakaburitsa izvozvo Kubudirira kweichi chiyero kubva kuApple smart wachi kwakabatana zvakanyanya nezviyero kubva kune ekutengesa oximeter.
Chidzidzo chinoburitsa kushanda kweApple Watch Series 6 oximeter
Ropa rako reoksijeni (kana kuzadza) chiratidzo chakakosha cheupenyu hwako hwese. Inokubatsira kuti unzwisise kana muviri wako uchitora okisijeni inodiwa uye kuti unoigovera sei. Iyo Apple Watch Series 6 inosanganisira yakasarudzika app uye sensor, iyo inogona kuyera yako oxygen saturation chero nguva. Wachi iyi inotarisira kuti iwe uite mushe, masikati neusiku. 1
Chidzidzo chakaburitswa mumagazini ine mukurumbira muzvarirwo 23 yaGunyana. Icho chinyorwa chakaburitswa chine zita rekuti: «Kufananidza kweSpO2 uye Yemoyo Rate Maitiro paApple Kutarisa uye Zvakajairika Zvekutengesa Oximeter muVarwere Vane Zvirwere Zvirwere ».
Kuedza kwacho kwaisanganisira varwere zana vane chirwere chisingaperi chisingabvumirwe chemapapu (COPD) kana chirwere chepakati chemapapu (ILD). Idzi hosha dzekufema system dzinoda a kuongorora kweropa oxygen saturation nekuti ese ari maviri epamusoro uye epasi matanho anokanganisa kudzora kwehutachiona. Ndokusaka vazhinji vevarwere vane maoetereter ekutengesa pamba.
Chidzidzo chakaedza kuongorora kushanda kweApple Watch Series 6 oximeter uye moyo rate monitor mukutora kweichi kukosha kuchichigadzirisa pamwe nehunhu hwakawanikwa neyakajairika kuzadza uye kupomba mamita. Chekupedzisira, mhedzisiro yakaratidza kuti kuyerwa kwewachi kwaive kwakaenzana nezviyero zvemaviri sensors, kupedzisa zvinotevera:
Mhedzisiro yedu inoratidza kuti Apple Watch 6 inzira yakatendeseka yekuwana kurova kwemoyo uye SpO2 mune varwere vane chirwere chemapapu pasi pemamiriro akadzora. Kufambira mberi kwe smartwatch tekinoroji inoramba ichivandudza uye zvidzidzo zvinofanirwa kuitiswa kuti zviongorore chokwadi uye kuvimbika mumhando dzakasiyana dzezvirwere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 6 oximeter inoshanda sekushambadzira zvinoenderana nekudzidza